Waxaanu Leenahay Kalsoonidii Aanu Ku Garaaci Lahayn Real Madrid – Lionel Messi Oo Farriin Culus U Diray Los Blancos Kaddib Saddexleydii Xalay | JAALENEWS
Waxaanu Leenahay Kalsoonidii Aanu Ku Garaaci Lahayn Real Madrid – Lionel Messi Oo Farriin Culus U Diray Los Blancos Kaddib Saddexleydii Xalay
Barcelona ayaa xalay hore u qaadday tallaabo weyn oo ay ugu dhowaanayso inay mar kale ku ceshato ku guuleysiga horyaalka LaLiga kaddib markii ay baabi’isay Sevilla oo ay u tagtay, isla markaana uu saddexley ka dhaliyey Lionel Messi
Xiddiga reer Argentine oo saddexleydiisaas kusii dheeraystay raacdada rikoodhada khaaska u ah ee uu ka dhigayo garoomada isla markaana uu ku baadi-goobayo inuu mar kale ku hanto kabta dahabka ah, ayaa waxa digniin u diray kooxaha kale ee horyaalka LaLiga kula jira iyo kuwa qaaradda Yurub ee tartanka Champions League.
Messi oo u warramay telefishanka beIN Sports kaddib dhamaadka ciyaartii Sevilla ayaa waxa uu tilmaamay inay kusoo fool leeyihiin kulamo adag, balse ay si adag u shaqayn doonaan si ay ugu guuleystaan dhamaan tartamada ay ka ciyaarayaan.
“Jid dheer ayaa loosii marayaa tartanka horyaalka, waxaana muhiim ah inaanu sii wadno farqiga hoggaanka. Waxa nagu soo fool leh kulamo adag, wayna adag tahay in lagu guuleysto, laakiin meesha kama saarayno inaanu tartan kasta ku guuleysano.” Ayuu yidhi laacibka reer Argentine.
Messi waxa kale oo uu ka hadlay ciyaarta Real Madrid ay Arbacada ugu tegayaan ee lugta labaad ee semi-finalka Copa del Rey, waxaanu yidhi: “Hal tallaabo ayaa nooga hadhay inaanu gaadhno finalka Copa del Rey, laakiin waa ciyaar adag oo aanu Real Madrid ugu tegayno garoonkooda. Waxaanu isku dayi doonaa inaanu ku guuleysano, waxaananu haysanaa kalsoonidii aanu guusha ku heli lahayn. Kaddib waxaanu ka fikiri doonaa horyaalka, dhamaan inaanu ku guuleysano ayaananu isku dayi doonaa
Dhinaca kale, waxa uu Messi ka hadlay Ciyaartii Sevilla ay 4-2 kaga adkaadeen, waxaanu tilmaamay inuu rajaynayey ciyaar adag, waxaanu yidhi: “Mar kasta way adag tahay in halkan lagu guuleysto. Waynu garanaynaa sida uu garoonkani yahay, waxaananu ognahay ciyaartoyga Sevilla ay haysato. Xaaladdu way nagu sii adkaatay markii ay nagaga horreeyeen goolasha, balse waxaanu garanaynay sida looga daba-tago.”
Ugu dambayn, Lionel Messi ayaa la weydiiyey hoos u dhaca ciyaareed ee ku yimid kulamadii ugu dambeeyey, waxaanu yidhi: “Mar kasta sida ugu sarreysa uma ciyaaari kartid, waanu tartamaynay, laakiin haddii aan si daacad ah u hadlo, heerkayagii ugu sarraysay maanaan joogin. Waxay taasi nagu adkaysay inaanu goolal dhalino.”
Barcelona ayaa Arbacada u tegi doonta Real Madrid oo ay wada ciyaari doonaan is aragga labaad ee semi-finalka Copa del Rey, waxaana afar maalmood kaddib ay isla Santiago Bernabue ku yeelan doonaan ciyaartooda labaad ee horyaalka LaLiga